Orkide | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Teknolojia momba ny fambolena amin'ny fambolena dipoavatra "Claudio F1": tombony sy singa miavaka amin'ny karazany
Ny Pepper "Claudio F1", izay manoritsoritra ny olona rehetra tia ireo hybrida malemy, dia mihalehibe ao amin'ny firenentsika. Io karazana mamy io dia malaza amin'ny mpamboly za-draharaha sy za-draharaha. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ity karazana vary ity isika. Famaritana ny vokatra "Claudio F1" - boloky Bulgarian, mamy.
Bletilla Orchid: ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny fikarakarana sy fikarakarana
Angamba ny mpamboly tsirairay dia manonofinofy ny voninkazo toy izany izay mety ho tsara tarehy sy tsy miovaova ho an'ny toetry ny toetr'andro, fa tsy mieboebo amin'ny fikarakarana henjana. Soa ihany fa misy ny zavamaniry toy izany, ary afaka mividy izany ianareo, angamba, any amin'ny fivarotana voninkazo tsirairay - ity no Ortille avy amin'i Billyilla. Eo amin'ny natiora, mitombo any amin'ny Farany Atsinanana, any Chine sy Japana io voninkazo io.
Inona no tokony ho fantatrao momba ny fikarakarana ny dendrobium ao an-trano
Orchid Dendrobium dia endriky ny an'ny fianakaviana Orchid ary mitana milanja mihoatra ny arivo. "Miaina amin'ny hazo" - izany no dikan'ny anarana avy amin'ny teny grika. Ny dendrobium ao amin'ny tontolo voajanahary dia mitombo tahaka ny orkidin'ny rivotra, epiphyte, ary misy lithophytes tsy dia mahazatra loatra, izany hoe mitombo amin'ny vato. Toeram-ponenana avy any New Guinea, Aostralia, Shina, Japon ny ala tropikaly.
Inona no tokony hataonao raha malazo ny orkide Phalaenopsis?
Ny orkide Phalaenopsis dia tena tsara tarehy sy be mpitia indrindra ao amin'ny orkide. Ireo zavamaniry mahavariana dia tsy mitovy amin'ireo voninkazo hafa, ary mila fikarakarana manokana izy ireo. Na aiza na aiza ahazoanao ny orkide Phalaenopsis, dia tsy hampalahelo ny hanolotra azy iray volana karakarainy raha ny toe-javatra sy ny fialana amin'ny solontenan'ny trano fonenan'ny trano.
Mety hitera-bolo ve ny mamanay? Fanandramana mifanohitra, fepetra fampiasana sy fanararaotana hafa
Chistets na stakhis volom-borona: fambolena sy fiahiana ao an-jaridaina
Manangana ny fepetra rehetra ho an'ny cyclamen izahay: nahoana no tsy mamelana ny zavamaniry sy ny fomba hamahana azy io?
Diarrhea ao amin'ny zanak'omby: inona no tokony hatao any an-trano (zava-mahadomelina, fanafodin'ny volokano)
Zavamaniry mahafinaritra miaraka amin'ny voninkazo mandritry ny taona - Reo Motley: sary sy fitsipika momba ny fikarakarana
Aretina amin'ny akoho mpihinan-trondro: ahoana ary ahoana no fomba fitsaboana aretina tsy azo avela
Famaritana ny karazam-bozaka hybrida "Rumba" sy ny sariny
Fijerena ankosotra ho an'ny atody Covatutto 54
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Orkide